China okpomọkụ mmetụta Manufacturer - Ogo okpomọkụ ihe kwuru - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > Okpomọkụ mmetụta
Ihe nkedo-na thermal Resistor - njikọ njikọta Ihe nkedo-na thermalresistor na-agbanye ọnọdụ okpomọkụ dabere na njirimara nke ịgbanwe agbanwe nke ihe na ọnọdụ okpomọkụ. Mgbe onye ana-ajụ ihe n’egosipụta grajentị, ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ bụ nke m ...
RTD njikọ igbe
Ihe nkedo-na thermal Resistor-Junction Box Overview Ihe nkedo thermalresistor na-adabere na njirimara nke ịgbanwe agbanwe ihe na ọnọdụ okpomọkụ. Mgbe ihe ana-ajụ ọkara na-egosi grajentị ọnọdụ okpomọkụ, ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ a tụrụ bụ nkezi ikuku nke ...
Njedebe thermo eguzogide
Onye na-emechi ihe na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-eme ka mmiri sie ike, tube nchebe, mpịakọta mmiri, usoro njikọ usoro, na mgbatị mkpuchi. Ọ na-akacha eji ndidi okpomọkụ mmesho nke uzuoku tobaim na-atụ bushes, mmiri ọkpọkọ ...
Ngwakọta RTD na-atụ ọnọdụ okpomọkụ dabere na njirimara nke na-agbanwe agbanwe nke ihe na ọnọdụ okpomọkụ. Mgbe ọkara a tụrụ na-egosi a grajentị gradient, okpomọkụ tụọ bụ nkezi okpomọkụ nke ọkara na nso ebe okpomọkụ mmetụta mmewere dị.
Ugbo agha RTD
Armored cable RTD ji armored USB nwere ike n'ụzọ dị irè welie ike ọdụdọ na compressive ike, na ịgbatị ọrụ ndụ. Na mgbakwunye na nguzogide nke ndị agha mpụga, ọ nwekwara ike igbochi nsogbu nnyefe nke ụmụ irighiri na-akpata. .
Igwe thermistor gbakọtara na-atụle okpomọkụ site na iji njirimara na nguzogide nke ihe na-agbanwe na mgbanwe nke okpomọkụ. Mgbe enwere gradient okpomọkụ na ọkara a tụrụ atụ, ọnọdụ a tụrụ atụ bụ nkezi okpomọkụ na ọkara ebe ọnọdụ okpomọkụ na-achọpụta ihe dị.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta Okpomọkụ mmetụta na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo Okpomọkụ mmetụta dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.